ODUU GAARII!: Dhaabbanni “The Human rights league of the horn of Africa (HRLHA)” jedhamu oromoonni hin beeknee jiru natti fakkatuu. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsODUU GAARII!: Dhaabbanni “The Human rights league of the horn of Africa (HRLHA)” jedhamu oromoonni hin beeknee jiru natti fakkatuu.
Dhaabbanni HRLHA jedhamu QABSOO bilisummaa oromoo wajjiin beellama tokko malee , kaffaltii tokko malee, walaba saba quncurfaamaa oromoo wajjiin dhaabbachuudhaan qabsoo hadhoftuu abbummaan irratti hojjachaa akka ture ifadha.
Dhaabbanni yeroo ammaa kana HRLHA jedhamu kun bara 1993 dhaabbata dhunfaa maqaan isaa “Bilisummaa Waldaa Maxxaansaa fi Beeksiisaa (BWMB)” jedhamu jalatti maqaa Gaazeexaa oromoo “URJII” of ijaaree Afaan Amaariffaa, Afaan oromoo, Afaan Ingiliziitiin ;Akkasumaas Maxxaansa(Matseetii) URJII jedhu Afaan Amaariffaatiin fi Gaazeexaa Coqorsa jedhu Afaan oromoo tiin ;darbee ammoo jaarsaa itti fufuudhaan baandii BILISUMMAA jedhamu dhaabuudhaan sagalee uummaataa ta’eera. Dhaabbatni kun dhaabbata hiriyaa hin qabnee halkaanii fi guyyaa kan isa hin daangeessine sagalee bilbiltuu uummataa oromoo, qabsa’oota fi Baqattottaa oromoo gaafa afrikaa fi iddoo garaagaaraa addunyaa kanarratti faca’aanyii jiraaniif sagalee guddaa fi Abdii saba cunqurfamee tahee hojii jechootni isaa hin ibsine hojjachaa tureera.
Akkasumaas bara 1996 ammoo dhaabbata maqaan isaa “The Human rights league ( HRL)” jedhamu hundeesse ijaa fi gurra oromoo guutuu addunyaa tahuudhaaf osoo hojjachaa jiruu ; mootummaan EPRDF bara (1997-2001) gaazeexeessitoota “URJII “;hojjattootaa wajjiiraa ukkamsanii godhuu,waajjiiraa cuufuu ,document fi computer saamuu dhaan waxabbajjii bara 2001 karaa keeniyaa baqatee biyya bahe. Gaazeexaa URJII (1993_1997)dinaagdee, siyaasaa, aadaa fi dhiitamuu mirgaa namoomaa ; irratti ijaa fi gurra oromoo tahuudhaan gargaaraa ture.Akkasumaas mirga saba kanaatiif abukaattoo fi Gaazeexeessaa tahuudhaa halkaanii fi guyyaa, duungoo tahee rakkoo oromoo biyyoota addunyaa kanarratti argamaan fi conference dhabbataa mootummoota gamtoomaanitti Ibsaa tahudhaan Qabsoo hadhooftuu geeggessaa tureera. The Human rights league of the horn of Africa (HRLHA )2007 bifa haaradhaan biyya kanaadaa Toronto tti dhaabbatee. HRLHA 2007 hanga fulbaana 10, 2018 falmaa mirgaa dhala namaa gaafaa afrikaa tahuudhan biyyoota akka :-
-keeniyaa fi Ugandatti hojii gita hin qabne baqattoota oromoo wajjiin hojjachaa tureera. Namni kana hojjaataa turee fi jiru Hundeessaa dhaabbata kana tahe qabsa’aa mirga dhala namaa obboo Gaaromaa B. Waaqeessaa ti.
Egaan waan hedduu tu hafa balinaan sagantaa isaa finfinneetti hordoofaa.
HRLHA ykn Falmaan mirga dhala namaa obboo Gaaromaa B. Waaqeessaa onkololleessaa 4;2018 gara finfinneetti ni imala.Rakkoo Oromoo addunyaatti beeksisuu irraatti obbo Gaaromaa B. Waaqeessaa Gita hin qaban.
Gaafaa guyyaa 04-10-2018 finfinneetti galuu gootaa keenyaa simaadha.
Of Eeggannoo: Mata-dureen manifesto jarri G-7 biyya alaatti baafattee irratti mari’aachaa turte: